Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ama-65% abakhweli beenqwelo moya e-US baxhasa iipasipoti zokugonya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Abangama-65% abakhweli beenqwelo-moya baxhasa iiPasipoti zokugonya
Ukuba i-FAA ithathe isigqibo sokuphumeza inkqubo yokundwendwela, phantse omnye kubahambi abali-10 uya kuthintelwa ukuba bakhwele kwinqwelomoya.
I-44% yabantu baseRiphabhlikhi bathe bayakuxhasa iimfuno zikarhulumente zokubonelela ngobungqina bokugonywa ukuze babhabhe.
I-48% yamaRiphabhlikhi nayo iyakuxhasa ukugunyaziswa ngokuthe ngqo kwiinqwelomoya.
Iipesenti ezingama-95 zeedemokhrasi ziya kuxhasa urhulumente okanye imfuno yokundwendwela yenqwelo moya.
Njengokonyuka kwe-delta, phantse i-65% yeeflaya ezihamba rhoqo zixela ukuba ipasipoti yokugonya iya kwandisa ukuzithemba kwabo kukhuseleko lokuhamba ngenqwelomoya, ngokwengxelo entsha. Ngelixa i-90% yeeflaya rhoqo zigonyelwe ngokupheleleyo okanye inxenye yokugonya intsholongwane.
La manani ayakhuthaza kuba iiflaya rhoqo zinamazinga aphezulu okugonya. Nangona kunjalo, ukuba i-FAA igqibe kwelokuphumeza Inkqubo yokundwendwela, phantse omnye kubahambi abali-10 uya kuthintelwa ukuba bangene kwinqwelomoya.
Olu phando lwenziwe kusetyenziswa indawo ekugcinwa kuyo rhoqo iFlyer Database, ebandakanya ngaphezulu kwama-200,000 okungena rhoqo kwiiflaya ezivela eMelika. Phantse iipesenti ezingama-65 zabathathi-nxaxheba abangaphezulu kweminyaka engama-60 ubudala, ezibabeka kwinqanaba lomngcipheko wokugula kakhulu kwi-COVID-19.
Umzi mveliso wezokhenketho yenye yezona zinto zibethakeleyo ngexesha lobhubhane, kuthintelwa ukuhamba kunye nokhenketho ukuba lume kancinci. Ukubuyiselwa kade. KuPhononongo lwamaFlaya aRhoqo lwama-2020, ama-60% abaphenduliweyo athi banezicwangciso zokuhamba kwezi nyanga zintandathu zizayo. Ukanti kwingxelo yalo nyaka, i-36% yabaphenduli bathe khange bahambe ukusukela ngeyoMqungu yowama-2020.
Kodwa umdla wokuhamba uyanda. Phantse i-70% yabaphenduliyo bathi banezicwangciso zokuhamba ngenqwelomoya kwiinyanga ezintandathu ezizayo, nge-72% yabo bahambi bacwangcisa uhambo lwabo.
Ukuguqula iiAirports zibe yiBillion Dollar cash ...